Yakatemerwa kambani: chii icho, hunhu, zvakanakira uye maitiro ekuigadzira | Ehupfumi Zvemari
Paunenge uchivaka kambani muSpain, imwe yemafomu emutemo anonyanya kushandiswa ndeye, pasina mubvunzo, yeruzhinji yakashomeka kambani. Izvi hazvibatsire chete kambani kuve nezvakawanda zviwanikwa, asi njodzi dziri mukudyara dzinogona zvakare kudzikiswa.
Asi, Chii chinonzi mubatanidzwa? Ndeapi maitiro avo? Inogona kuumbwa sei? Kana iwe uchifarira iyo nyaya, saka isu tinokubatsira iwe kuti uizive zvishoma zvakanyatso nyatso.
1 Chii chinonzi ishoma kambani
1.1 Hunhu hwesangano
2 Zvakanakira nekuipira SA
2.1 Mukwikwidzi mukana
2.2 Inogona kuwedzerwa
2.3 Manyowani matsva emari anowanikwa
2.4 Zvisarudzo zvisiri izvo zvinoitwa
2.5 Zvinogona kuve zvakaomarara kune vese veyeti vatambi kutora chikamu
3 Maitiro ekubatanidza yakashomeka kambani
Chii chinonzi ishoma kambani
Yakabatana-stock kambani, inozivikanwawo nechidimbu chayo, SA, kana sekambani yejoin-stock, ikambani yebhizimusi mune iyo vadyidzani vane chikwereti chakaganhurana chemari yavakapa. Ndokunge, yega yega inobata chikamu chemari yakaiswa mari, kwete yeiyo yose.
Kunyanya, iyo Pan-Hispanic duramazwi repamutemo Spanish rinotsanangura mubatanidzwa akadai se:
"Capital mercantile company, umo yakakamurwa kuva maquququ anonzi magores uye mune vamwe vacho vasiri ivo pachavo mhosva yezvikwereti zvemakambani."
Kubva pane yayo pfungwa tinogona kusarudza akateedzana e hunhu hunotsanangura mubatanidzwa. Izvi ndeizvi:
Guta rayo rakakamurwa kuita zvikamu. Mumwe nemumwe mudiwa anopa capital x, iyo inoshandurwa kuita zvikamu zveiyo kambani kana kambani. Naizvozvo, ivo vadyidzani vanopedzisira vava vagovani uye vanotora chikamu zvichibva pane zvikamu zvavanazvo. Mune mamwe mazwi, chero munhu anopa zvakawanda ane akawanda masheya. Izvi zvinogona kutengeswa zvakasununguka, chero sarudzo yemuridzi yekuzviita yaitwa.
Pane chikwereti chakatemerwa kune capital. Nekuti mugove wega wega anoisa chikamu chemari, tinoona kuti chisungo chavo kune wechitatu mapato hachina muganho asi zvinoenderana chete nekukosha kwezvikamu izvozvo.
Vashandi havafaniri kuzviita vanozivikanwa. Sekambani yeruzhinji yakashomeka, vagovani, kunyangwe hazvo vachibatanidzwa nekambani, havafanirwe kuita kuti kutora kwavo nzvimbo kuve pachena. Mune mamwe mazwi, ivo havafanirwe kutora hofisi kana kushandira nzanga. Ivo vanoonekwa sevamwe capitalist vadyidzani kana capitalist vagovani
Kambani inobvisirwa mutero kuburikidza neMutero Wemutero uye, pamusoro pezvo, vane hunhu hwavo hwepamutemo.
Iine zvekumanikidza nhengo. Kunyanya, iwe unofanirwa kuve uine:
Musangano weVazhinji Vanogovana: uko misangano nevanogovana vanoshevedzwa kuti vataure nezvekushanda uye manejimendi ekambani.
Kambani maneja: kuumba timu yekambani. Izvi zvinogara zvichisarudzwa pamusangano wevashandi vese.
Supervisory Council: inosarudzika uye iri pamusoro pekuona kuti maneja azadzisa basa ravo zvakakwana.
Zvakanakira nekuipira SA
Kunyangwe iyo yeruzhinji kambani yakashomeka inogona kuonekwa seyakakodzera kwazvo bhizinesi nhamba kune mamwe makesi, uye hapana mubvunzo kuti inounza mikana yakawanda, zvakare ine zvimwe zvinokanganisa izvo zvinofanirwa kutariswa.
Kana ari zvakwakanakira, izvi zvinotsanangurwa chaizvo, uye ndiwo:
Mune iyo chokwadi chekuti, nekuita basa bhizinesi, urikuita kuti iratidzike yakasimba. Uye zvakare, kuve nevakabatana capitalist, vasingafanire kutora chikamu chemabasa anoshanda kana kumhanya kwekambani, inopa rusununguko rwakawanda pakuitarisira.
Uye ndeyekuti iyo kambani inogona kuve nayo mupiro mukuru wevanhu vakati wandei asi vasingakoshese kufambira mberi kwebhizinesi, kudarika misangano.
Kuva nekambani shoma kunokutendera kuti uwedzere mikana yekuwedzera. Uye, mune ino kesi, hapana hushoma kana huwandu huwandu hwevabatsiri kuti vape mari.
Manyowani matsva emari anowanikwa
Izvo zvekuti iro share capital rinogona kupatsanurwa uye kuti mumwe nemumwe mudiwa anopa mari inobvumidza matsva matsva emari kuwanikwa uye, neizvi, vatyairi vatsva avo, zvakananga kana zvisina kunangana, zvichawedzera kuwedzera kwebhizinesi uye mikana yeizvi.
Zvino, mune iyo nyaya ye zvinokuvadza zvesangano, kune zvakare akati wandei ekufunga, akadai se:
Zvisarudzo zvisiri izvo zvinoitwa
Hazviiti kuti nguva dzose zviitike, asi pane mukana mukuru wekuti izvi zvizoitika nekuti vabatsiri vacho, kunyangwe ivo vasina nzvimbo dzehutungamiriri mukambani, chaizvo vane simba rose. Ivo vanochengeta kuvhota, kutora chikamu uye kodzero dzesarudzo, zvinoreva kuti vanogona kuchinja mafambiro ekambani kana vachida, kupindira mune chero chinhu chebhizinesi iri.
Uye dambudziko nderekuti masimba avo akakosha zvakanyanya kupfuura aya enhengo dzinomhanya kana kubata kambani.
Zvinogona kuve zvakaomarara kune vese veyeti vatambi kutora chikamu
Kunyanya mumisangano umo kufambira mberi kwebhizinesi kunofanirwa kukurukurwa. Kana paine vakawanda vanobatana nemabhizimusi uye zvichidikanwa kuti usangane navo vese, unogona kuona kuti vazhinji havapinde musangano uyu.
Ichi inotadzisa chiteshi chekutaurirana kana zvinogona kupedzisira zvaguma vaneta munharaunda kana vasingaone mabhenefiti.
Maitiro ekubatanidza yakashomeka kambani
Zvino zvaunoziva kuti yeruzhinji yakashomeka kambani chii uye kunaka kwayo pamwe nekukanganisa kwayo, iwe unoda kuseta SA? Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti izvi zvinotongwa ne Capital Makambani Mutemo (Royal Mutemo Mitemo 1/2010, Nenyaya yakadzokororwa yeCapital Companies Act inogamuchirwa), ndipo panodiwa zvido zvinofanirwa kuzadziswa. Pakati pavo, pane chokwadi chekuitwa kuburikidza negwaro reruzhinji, pamwe nekunyoresa muMercantile Registry rine zita kana zita rekambani rinoteverwa neanotanga ayo anozvizivisa seasinga zivikanwe (SA).
La zvinyorwa zvekubatanidzwa Inofanira kunge iine data rinotevera:
Zita rekambani kana data rakazara revapi, zvichienderana nekuti ivo vanhu vepamutemo kana vanhu chaivo zvakateerana.
Chirevo chinosimbisa kuti vanopa vane chido chekugadzira kambani yeruzhinji.
Iyo inosimbisa kuti yakawanda sei bumbiro remitemo ichave, anenge.
Mitemo yekambani. Izvi zvinofanirwa kugamuchirwa nevose vanopa.
Dhairekita revatariri, vangave vari vanhu vepanyama kana vepamutemo.
Zvakare, iwe unofanirwa kudaro chengetedza kuti chikamu chidiki chemari chinopihwa. Iyi 60000 euros, yakakamurwa muzvikamu zvakanyoreswa zvinoenderana neguta iro mumwe nemumwe waari kudyara mukambani. Pakati payo yese capital, painogadzirwa, 25% yayo inofanirwa kupihwa, uye inofanirwa kubvumidzwa kuisa iyo yasara mari kwairi.
Iye zvino zvawava kuziva zvakawanda nezvekambani, iri iro repamutemo sangano raunoda?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Asingazivikanwe nzanga